Preorder Sales Rep. (သက်န်းကျွန်း၊ ရန်ကင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ Bahan) အမြန်အလိုရှိသည် at I.P. One (Myanmar) Company Limited | MyJobs
- အလားအလာကောင်းများ၊ customer/ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် သတ်မှတ်ပေးထားသော အရောင်းမြို့နယ်/နယ်မြေများအတွင်း (သက်န်းကျွန်း၊ ရန်ကင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ ဗဟန်း မြို့နယ်များ) E-Bike ဖြင့် သွားလာဆောင်ရွက်ရန်။
- Travel within sales territory (with E-bike) to meet prospects and customers.
- Must be able to ride e-bike with assigned territory
· သက်န်းကျွန်း၊ ရန်ကင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ ဗဟန်း မြို့နယ်များအတွင်း E-bike ဖြင့် အရောင်းထွက်နိုင်ရမည်။
- သက်န်းကျွန်း၊ ရန်ကင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ ဗဟန်း မြို့နယ်တစ်ခုခုတွင် အခြေချနေထိုင်သူများနှင့် ပိုသင့်တော်သည်
I saw this job posted on https://www.myjobs.com.mm/job/856202 and thought you might be interested in it.